Daawo dabaaldaga 18ka May ee soomaaliland si wanaagsan u dhacday – idalenews.com
Daawo dabaaldaga 18ka May ee soomaaliland si wanaagsan u dhacday
Dadweynaha reer Somaliland ayaa maanta u dabaal degay sanad-guuradii 22aad markii ay ku dhawaaqeen inay gooni isaga taageen Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991-dii, iyadoo munaasabado ballaaran ay kala dhaceen deegaanada Somaliland.
Munaasabadahan ayaa kuwooda ugu ballaaran waxay ka dhaceen magaalada Hargeysa iyo Burco oo aheyd halkii lagaga dhawaaqay gooni isu taaga Somaliland ee haatan 22-jirsatay, balse aanay aqoonsiga helin.
Ciidamada kala duwan ee Somaliland ayaa dhoolatus cajiib ah ku soo bandhigay dabaal dega 18-ka May, iyagoo socod ku maray fagaaraha wadada bartamaha Hargeysa ciidamada Milateriga, kuwa Booliska, Asluubta, ciidamada badda iyo Arday.
Gawaarida gaashaaman iyo kuwa Tiknikada ayay ciidamada ku soo bandhigeen dabaal dega, kaasoo aan horay loo arag, waxaana dabaal degan uu ahaa mid ka duwanaa kuwii hore.
Dadweynaha reer Somaliland ayaa ku labisnaa dharka calanka, iyagoo watay koofiyadaha calanka ku buufsanaa iyo dhalinyaro wajiyada ku qortay astaanta Calanka, iyagoo dhoola tuska qeyb ka ahaa kooxo fardooley iyo Libaaxyo la huwiyay Calanka Somaliland oo lagu soo bandhigay goobta.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo oo ka hadlay fagaare ku yaal Hargeysa oo ay isugu soo uruureen dadweynihii ka qeyb qaadanayay dabaal dega ayaa mar kale ku celiyay in aanay diyaar u aheyn in Soomaaliya la midoobaan.
Axmed Siilaanyo ayaa sheegay in go’aan shacabi uu yahay gooni isu taaga, isla markaana uu yahay mid lama taabtaan ah, isagoo xusay in bulshada Somaliland ay xaq u leedahay sida Bulshada caalamka intiisa kale xornimo ugu nool yihiin.
“Waxaa soo tijaabinay midnimada, kalsooni dambe diyaar uma nihin, waa go’aan shacbi gooni isu taaga Somaliland waana lama taabtaan”ayuu yiri Madaxweyne Siilaanyo.
Ugu dambeyn Munaasabada 18-ka May ee maanta laga xusay deegaanada Somaliland ayaa ku soo aadeysa, iyadoo Somaliland ay diiday ka qeyb galka shirkii London, isla markaana ay ceel ku sii dhaceyso aqoonsiga ay caalamka ka doonayaan inay ka helaan.
Xarunta Waxbarashada ee Anadol ayaa maanta si rasmi ah looga furay magaalada Muqdisho